निर्वाचन स्वच्छतामा चुनौति « Anumodan National Daily
निर्वाचन स्वच्छतामा चुनौति
यस वर्ष नेपालमा तीन तहका चार वटा निर्वाचन भएका छन् । निर्वाचनका दिन हुने हिंसात्मक घटनालाई आधार मान्ने हो भने यहाँको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रह्यो । विगत जस्तो निर्वाचनका दिन कुनै मतदाता हताहतिमा परेनन् । तर निर्वाचनको गुणस्तर हेर्ने हो भने विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित त्रुटिहरू प्रशस्तै भएका छन् । २०७४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एक पर्यवेक्षकका रूपमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ र २ का केही मतदान केन्द्रको अवलोकन गर्दा देखिएको वस्तुस्थिति यहाँ पस्कने प्रयास गरिएको छ ।
कैलाली जिल्लामा अधिकांश मतदानस्थल अति संवेदनशील र संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको थियो । यसर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन अगावै हरेक जसो मतदानस्थलमा पुगी सुरक्षा रणनीति बनाएका थिए । जसका कारण यस प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको जिल्लामा व्यवस्थित किसिमले मतदान, मतपेटिका संकलन तथा मतगणना सम्पन्न भएको छ । सुरक्षाका हिसाबले यहाँको निर्वाचन शान्तिपूर्ण भन्न सकिन्छ ।
मत बदर नहोस भन्नका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाएको थियो । मतदाता शिक्षाका लागि जिल्लाका बुथ संख्या बराबर मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाइएका थिए । एक हजार मतदाता बराबर एक बुथको व्यवस्था थियो । कैलालीको औसत परिवार संख्या ५ जनालाई आधार बनाउँदा एक कार्यकर्ताको भागमा दुई घर परेका छन् । एक महिनाका लागि नियुक्त ती कार्यकर्ताले २० दिन घरदैलोको समय दिँदा पनि प्रतिदिन १० घरमा पुग्दा हुन्थ्यो । यसो गर्दा धेरै मतदातासम्म मतदाता शिक्षा पुग्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको विश्वास थियो ।
निर्वाचन आयोगको अपेक्षाअनुसार मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको मिहिनेत र मतदाताको व्यवहार भएन ।
यस्ता केही मतदान केन्द्रमा चुनावी शान्तिपूर्ण र प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र भएको जस्तो लाग्दथ्यो । यस्ता मतदान केन्द्रमा खसेको कूल मतसंख्या पनि अत्याधिक देखिन्छ ।
मतदाताहरूलाई हामी वर्षैदेखि मत हालिरहेकाले आइहाल्छ भन्ने घमण्ड थियो । जो जान्दथे उनीहरूले परिवारका सदस्यलाई पनि सिकाएनन् । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसँगै भएकाले फरकफरक चिन्हमा मत दिन चाहेका मतदाताले एउटै मतपत्रमा दुई ठाउँमा छाप लगाएर मत बदर भयो । साघुरा मतदान केन्द्रमा प्रदेशको मतपत्र प्रतनिधि सभाको पेटिकामा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको मतपत्र प्रदेश सभाको पेटिमा खसाइएकाले ती मत पनि बदर भए । यस्तै प्रदेश रप्रतिनिधि सभामा सझा उम्मेदवार उठाएका बामगठबन्धनका समानुपातिकमा केही मतदाताले दुवै चिन्हमा छाप लगाएकाले बदर भए । छाप नै लगाउने र औंठा छापको समस्या यस चुनाव पनि देखियो । केही मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको जागिरे मानसिकताले मतदाता शिक्षा पनि कमजोर भयो । तोकिएको दिन काम नगर्ने, गरेको दिन पनि केही घरमा मात्र जाने, त्यहाँ पुगेर पनि मतदातालाई सिकाउने भन्दा आयोगलाइ बुझाउनुपर्ने फाराममा नाम मात्रै भर्ने गरेको देखियो । यसले गर्दा स्थानीय तहको भन्दा कम भएपनि आयोगले गरेको व्यवस्था र खर्च अनुसारको मतदाता शिक्षामा सुधार देखिएन । केही ठाउँमा निर्वाचन प्रचार सामग्रीहरू टासेको लगतै च्यातिएका भेटिए ।
मतदान केन्द्रमा पनि मत मागियो
सामान्यतया: सुन्य समय शुरुभएपछि प्रचारप्रसार र मत माग्ने काम घोषित रूपमा बन्द हुन्छ । उम्मेदवारहरू र उनका प्रतिनिधिहरूले घण्टौसम्म एउटै मतदान केन्द्रमा बसेर मतदातासँग भोट मागेको पाइयो । सामान्यतया लाइनमा बसिसकेका मतदातासँग मत माग्न पाइदैन । तर केही मतदान केन्द्रमा उनीहरूले इच्छाअनुसार लाइनमा मत माग्ने, एजेण्टसँगै बसेर मतदातालाई मत मागेको पाइयो । यसतर्फ मतदान अधिकृतको कुनै चासो देखिएन । एउटा मतदान केन्द्रमा एउटा दलका नेताले मतदान अधिकृतलाई पटकपटक भेटन चाहेपनि सुरक्षामा खटिएका प्रहरी नायव निरीक्षकले भेटनै नदिएको र एकपटकमा २० जना मतदाता मात्रै मतदानस्थलको गेटभित्र प्रवेश गर्न दिइएको पाइयो ।
सवारी साधनको अत्याधिक प्रयोग
निर्वाचन आचारसंहिताले एक उम्मेदवारले ४ वटासम्म गाडी र मोटरसाइकल चलाउन पाउने व्यवस्था गरेपनि यो भन्दा धेरै गाडीहरू प्रयोग गरेको पाइयो । अहिले धेरै जनाका मोटरसाइकल र गाडी पनि हुने र चुनावको बेला झण्डा हालेर दौडिने गरेकाले सवारी साधनको सीमाको कुनै अर्थ रहेको देखिएन ।
मतदानमा गोपनियता ?
मतदान गर्ने कक्ष खुला स्थानमा रहेको र मतपेटिकाको सुरक्षाको लागि खटिएका प्रहरी व्यक्ति मतदान कक्ष नजिकै हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा मतदानको गोपनियता नरहेको र कानेखुशी गरिएको पनि देखियो । केही स्थानमा सहयोगी (यो मतपत्र यहा हाल्ने भनेर देखाउने) ले मतदातालाई प्रभावित पारेको देखियो ।
मतदान स्थल र मतदाता नामावली रुजु
बस्तीसँगै जोडिएका मतदानस्थल वरपरै मतदातालाई प्रभावित गरिने गतिविधि देखिए । मत नदिने शंका लागेको व्यक्तिलाई पहिले घरभित्र लगेर संझाउने (प्रभावित गर्ने) अनिमात्र भोट हाल्न पठाउने गरेको पनि देखियो । केही ठाउँमा मतदान केन्द्र आसपासका चिया पसलमा भेटेर भोट हाल्न लगाउने वा भोट हालेर आइसकेपछि खानपिन गरे गराएको देखियो । यस्ता पसल उम्मेदवारका फरकफरक पनि देखिए । पार्टीहरूले मतदाता ओसार्न प्रशस्तै मोटरसाइकल प्रयोग गरेका थिए । त्यस्ता मोटरसाइकल मतदाता बोकेर मतदानस्थलसम्म ल्याउथे र पुर्‍याइदिन्थे । यता मोटरसाइकल भाडामा पनि काम गर्थे ।
केही मतदान केन्द्रमा मत खशाल्न आएको व्यक्ति उही नै हो होइन एकीन गरेको देखिएन् । व्यक्तिले बोकेर ल्याएको मतदाता परिचयपत्र मतदाता सूचीमा भिडाउँदा मिले भोट हाल्न पाइन्थ्यो । तर कार्ड अनुसारको व्यक्ति उही हो होइन सनाखत भएको देखिएन । यसले गर्दा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको कार्डमा मतदान गर्ने संभावना प्रशस्तै थियो । यस्ता केही मतदान केन्द्रमा चुनावी शान्तिपूर्ण र प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र भएको जस्तो लाग्दथ्यो । यस्ता मतदान केन्द्रमा खसेको कूल मतसंख्या पनि अत्याधिक देखिन्छ ।
कुटपिट, आगजनी, बम बिस्फोट
लम्कीचुहा नगरपालिकामा २०७४ मंसिर २० गते राति एक जना एमाले निकटका व्यक्ति काँग्रेसका कार्यकर्ताबाट कुटिए । क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश (२) का एमाले उम्मेदवार रतन थापाको गाडीमा उनैको घरकै आगनमा आगजनी भयो । विभिन्न स्थान (टीकापुरको समितिपुर, बसपार्क, दुर्गौली) मा अज्ञात समूहले बम राखेको पाइयो । नेपाली सेनाको टोलीले बम निष्क्रिय गरेको देखियो ।
कतिपय मतदाताका दोहोरो परिचयपत्र एकै मतदान केन्द्रमा फेला परे । मतदाता परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाउँदा वा विवरण दिँदा फरक परेका वा नियतवश के गरेका हुन भन्ने कुरा निश्चित भएन् । तर, दोहोरो नाम भएका व्यक्तिका कार्ड नम्बर पनि फरक रहेकाले एकै व्यक्तिले दुई पटक मतदान गर्न सक्ने संभावना पनि देखियो ।
एक घर, झण्डा अनेक
एउटै व्यक्तिका घरमा हरेक पार्टीका झण्डा राखेको पाइयो । यसमा घरमालिकको सहमति लिएको देखिएन । लगाएको झण्डा हटाउँदा विवाद आउने भएकाले कसैले मुख नखोलेको पाइयो । भने केही ठाउँमा आफ्नो मतदाता ठानिएका व्यक्तिका घरमा अर्कै दलको झण्डा लगाएको देखेपछि वा अर्को दललाई मत दिने संभावना देखेपछि भेटेर, विभिन्न व्यक्तिले फोन गरेर दवाव दिने गरेको पाइयो । गाउँमा पर्चा, पम्पलेट, व्यानर, झण्डाको अत्याधिक प्रयोग गरेको देखियो । यसैगरी साना बालबालिकालाई पनि पार्टीका झण्डा सहजै उपलब्ध गराएकाले उनीहरू रहरले पनि ती झण्डा बोकेर पार्टीका कार्यक्रममा गएको देखियो । यहाँ दलका नेता वा कार्यकर्ताले बालबालिकालाई कार्यक्रममा प्रत्येक्ष लिएको देखिदैन तर आफै जाने वातावरण बनाई दिएका देखियो । आगामी निर्वाचनमा पार्टीका झण्डाको प्रयोग घटाउनुपर्दछ । अरूको घरमा झण्डा लगाउने काम बन्द गरिनुपर्दछ ।
सामाजिक संस्था राजनीतिमा
सामाजिक, धार्मिक संस्थाहरूले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा लाग्न नहुने भएपनि केही सामाजिक र केही धार्मिक संस्थाहरूले खाश उम्मेदवारको पक्षमा माहोल बनाउने, प्रचारप्रसार गरेको देखियो ।
प्रचारमा शिक्षक कर्मचारीको अग्रसरता
विभिन्न दलका प्रचारप्रसारमा ती दल निकटका शिक्षक कर्मचारीहरू यस पटक पनि सहभागी भएको पाइयो । आफू निकटका उम्मेदवारलाई मत माग्न सजिलो होस भन्नका लागि विभिन्न संगठनहरूले कार्यक्रम आयोजना गरिएको पाइयो ।
निर्वाचनमा पर्चापम्पलेट नगर्ने भनिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रशस्तै पर्चा पम्पलेट टासेको पाइयो । केही पार्टीले हरेक दिनको घरदैलो सभामा सयौं मानिस परिचालन गरेको र उनीहरूलाई खाना, खाजा, जलपान गराएको देखियो । समाजका सीमान्तकृत मानिसलाई ससानो समूहमा होटलमा बोलाउने, ख्वाइपिलाई गरेर पठाउने गरेको, खर्च बाँटने गरेको भेटियो ।
निर्वाचन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालको निर्वाचन आयोगको टोलीले जापानको निर्वाचनको अवलोकन गर्दाको अनुभव सान्दर्भिक होला । नेपाली टोलीले देखेको जापानको निर्वाचनको दृश्य यस्तो थियो : जापानमा चुनावको दिन थियो । खुला चौरमा मतपेटिका राखिएको थियो । एक जना सहयोगीका साथ मतदान अधिकृत मतदाता परिचयपत्र रुजु गर्दै मतपत्र दिन्थे । मतदाताहरू मत हालसिकेपछि आफ्नो बाटो लाग्थे । मतपेटिकाको सुरक्षा एकै जना सुरक्षाकर्मीले गरिरहेका थिए । त्यहाँ मतदाताको लामो लाइन थिएन् । मतदानस्थलमा घेरबार पनि थिएन् । कुनै दलका एजेण्ट पनि देखिएनन् । सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिएनन् । मतदानस्थल वरपर मानिसको भीड जम्मा भएको थिएन् ।
यो दुश्य देखेका नेपाली अधिकारी जापानी अधिकारीलाई सोधेछन : यहाँ बुथ क्याप्चर हुँदैन ? जापानी अधिकारीले उल्टै साधेछन यो बुथ क्याप्चर भनेको के हो ? यो सुनेर हच्किएका नेपाली अधिकारी अनकन गरेर मतलव कसैले अरुकै नाममा मत खसाउँदैन ? जापानी अधिकारी यो सुनेर झन अचम्भित भएर सोधेछन् हैन मानिसले अर्के व्यक्तिका नाममा मत कि खसाल्छ ? नागरिकले आफ्नो मत मात्र आफूले खसाल्ने होइन् र ? जापानीजले सरल रूपमा सोधेका प्रश्नको उत्तर अप्ठ्यारो मान्दै हो भनेर टारेछन् । यो पनि जापानको आम निर्वाचन थियो । नेपालमा भने नेपालकै मापदण्डमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलिरहित र शान्तिपूर्ण बनाउन अझै वर्षौ कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।